Blackmagic ဒီဇိုင်းက Blackmagic RAW 1.5 ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Blackmagic ဒီဇိုင်း Blackmagic RAW 1.5 ကြေညာ
Fremont, California ပြည်နယ် - စက်တင်ဘာလ 13, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ Blackmagic RAW 1.5 ကို Adobe Premiere Pro ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်အတူသစ်တစ်ခုဆော့ဖ်ဝဲကို update ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer အပေါင်း, Mac, PC နဲ့ Linux တို့အတွက် Blackmagic RAW မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု, ဖောက်သည်များကသူတို့ Blackmagic RAW file တွေကိုနှင့်အတူပလက်ဖောင်းနှင့်တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေါ်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်။ Blackmagic RAW 1.5 မှယခု download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်ပါသည် Blackmagic ဒီဇိုင်း web site ကို။
Blackmagic RAW 1.5 သည့်အပေါ်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည် Blackmagic ဒီဇိုင်း IBC 2019 တဲ # 7.B45 ။
အသစ် Blackmagic RAW 1.5 update ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ကို Windows နှင့် Linux အပေါ်ယခုရရှိနိုင်သည့် Blackmagic RAW မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်းပါဝင်သည်။ Blackmagic RAW မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်းသူတို့ရဲ့ system ပေါ်တွင်အပြည့်အဝ resolution ကို Blackmagic RAW ဘောင်ကုဒ်ဖြုတ်၏အမြန်နှုန်းစမ်းသပ်များအတွက် CPU နဲ့ GPU ကို benchmarking ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဖောက်သည်များတိကျမှန်ကန်ပြီးလက်တွေ့ရလဒ်တွေကိုရနိုင်အောင်အကွိမျမြားစှာ CPU ကို cores နှင့်အဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းအလိုအလျောက်စမ်းသပ်နေစဉ်အတွင်းတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အသုံးပြုကြသည်။ 3, 1: 5, 1: 8 သို့မဟုတ် 1: 12 နှင့်စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ဆန္ဒရှိ resolution ကိုရိုးရှင်းစွာအ Blackmagic RAW စဉ်ဆက်မပြတ်ဘစ်နှုန်း 1 ကိုရွေးပါ။ ရလဒ်များကွန်ပျူတာအားလုံးထောက်ခံဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီကုဒ်နိုင်ပါတယ်မည်မျှစက္ကန့်လျှင် frames များကိုပြသသည့်ဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ် table ထဲမှာပြသလျက်ရှိသည်။
Adobe Premiere Pro ကိုအလုပ်လုပ်အယ်ဒီတာများနှင့် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer ယခု Blackmagic RAW 1.5 တှငျတှေ့အခမဲ့ plug-in ကို အသုံးပြု. Blackmagic RAW file တွေကိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားသစ်ကို plug-ins များကိုတိုက်ရိုက် Blackmagic RAW နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အယ်ဒီတာများကို enable ဒါကြောင့်သူတို့မရှိတော့ဖိုင်တွေ transcode ရန်ရှိသည်။ အဲဒီကင်မရာကမူလ Blackmagic RAW file တွေကိုတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာတလျှောက်လုံးသုံးနိုငျဆိုလိုသည်။ proxy ကိုဖိုင်များကိုဖန်တီးပြီးသွားများအတွက်တည်းဖြတ်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်မရှိတော့ရှိပါသည်။ သေးငယ်တဲ့ခေတ်သစ်, GPU ကိုနှင့် CPU ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်အခြားမည်သည့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကို format ကိုထက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းဖိုင်တွေအရှိန်တွင်ဤ plug-ins များကို RAW ၏အရည်အသွေးဆောင်ခဲ့ရမည်။
စီမံကိန်းများ DaVinci သို့ Premiere Pro ကိုသို့မဟုတ်မီဒီယာ Composer ကနေပြောင်းရွေ့ကြသောအခါ, လူအပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံးအရောင်ဆုံးမခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်ဖြေရှင်း, ကင်မရာအပေါငျးတို့သ RAW metadata ကိုနှင့်ပုံရိပ်အရည်အသွေးရှိနေတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
"Blackmagic RAW ယခုအားလုံးအဓိကပရော်ဖက်ရှင်နယ် NLEs အလုပ်လုပ်အယ်ဒီတာများများအတွက်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်" ဟု Grant ကအသေးသုံးငွေကပြောပါတယ်, Blackmagic ဒီဇိုင်း စီအီးအို။ "သင်ယခုအားလုံးအစဉ်အဆက်ရဲ့အရည်အသွေးဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ, proxy ကိုဖိုင်တွေကိုဖန်တီးရန်မလိုဘဲ DaVinci ဖြေရှင်းရန်အတွက်သူတို့ကိုအပြီးသတ်ထို့နောက် Premiere Pro နဲ့မီဒီယာ Composer အတွက်ဇာတိ Blackmagic RAW file တွေကိုတည်းဖြတ်နိုငျသောကွောငျ့ဒါဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာင်!"
Blackmagic RAW 1.5 အင်္ဂါရပ်များ
Mac, Windows နှင့် Linux တို့အတွက် Blackmagic RAW မြန်နှုန်းစမ်းသပ်ခြင်းပါဝင်သည်။
Adobe Premiere Pro ကိုထောက်ခံကြောင်းထပ်ပြောသည်နှင့် လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာ Composer ။
Blackmagic RAW 1.5 မှ download ပြုလုပ်ယခုရရှိနိုင် Blackmagic ဒီဇိုင်း web site ကို။
ကုန်ပစ္စည်း Blackmagic RAW 1.5 ဓါတ်ပုံများအဖြစ်ရှိသမျှသည်အခြားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
2019 IBC Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လှံ & Arrows စာတန်းထိုး, ဒစ်ဂျစ်တယ် Nirvana, မီဒီယာစောင့်ကြည့်ရေး, IBC ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-13
ယခင်: Blackmagic ဒီဇိုင်းကြေညာချက်များ Blackmagic URSA အသံလွှင့် Update ကို
နောက်တစ်ခု: Blackmagic ဒီဇိုင်းသစ် Blackmagic ဗီဒီယို 12G Assist ကြေညာ